Io ve no Faran'ny Hillary Clinton? | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 19, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Na dia te hieritreritra ny tenako ho Libertarian aza aho, angamba misy Anarkista kely ato amiko. Ankafiziko ny demokrasia amin'ny Internet ary koa ny vidin'ny haitao ambany. Izy roa dia mampisolo tena hanome hery an'ireo tsy nividy azy.
Ny tranga iray dia ity parody nataon'i Hillary Clinton farany teo amin'ny dokambarotra Apple 1984 ity. Navoaka tamin'ny Youtube ilay horonantsary ary efa nijery maherin'ny 300,000. Izaho manokana dia nahazo «chuckle» avy tao. Tsy mpankafy ny senatera Clinton aho, na dia azoko tsara sy hajaiko aza ny talenta an'ny vadiny amin'ny maha-orator sy mpanao politika mahay azy.
Ny mahatsikaiky amin'ity horonantsary vita an-trano ity dia ny famoahana ny hatsiaka tsapako isaky ny mahita ny senatera Clinton miteny aho. Mahaliana ahy ny fiantraikan'ny horonantsary toy izao amin'ny fampielezan-kevitra. Tsy misy na inona na inona ao amin'ilay horonan-tsary manondro an'i Hillary Clinton ho safidy tsy mendrika ho an'ny Filoham-pirenena… fotsiny mahatsapa izany fomba izany.
Tsy ny olona ihany no nanokana fotoana hanaovana an'io, fa olona manohana ny senatera Obama. Vokatra tsara ity horonantsary ity ary, heveriko fa tsy nandany vola afa-tsy ny fotoana hampivelarana. Tapitra hatreo ve ny fihazakazahan'i Hillary Clinton ho filoham-pirenena?
Ity ny dokam-barotra tany am-boalohany avy amin'ny Apple (naseho nandritra ny Superbowl tamin'ny androny):
Politika ratsy ve ity? Zom-pirenena ratsy? Tsy tompon'andraikitra ve izany? Ao anatin'ny tontolo iray misy ny sarin'ny besinimaro ny zava-drehetra ary mandany vola an-tapitrisany (tsy ho ela an'arivony tapitrisa) ny mpanao politika hanosehana io sary io, tsy mampihomehy ve ny teknolojia apetraka am-pelatanan'ny olona tokana ka mety hanetsika ny fifidianana iray manontolo?
Io rehefa mahazo fahafinaretana!
Mar 20, 2007 amin'ny 12: 19 AM
Mampiahiahy lalina an'ity doka ity aho.
Toa tsy mety amin'ilay dokam-barotra ny bitsika. Tsapako fa misy ny mampihomehy amin'ny tany am-boalohany, izay mampifanaraka ny hoe "handresy isika" amin'ny fanipazana ny tantanana. Saingy tany am-boalohany, ilay feo dia manana toetra ratsy miharihary ho azy. Ireo bitesy ireo dia fanandramana miharihary an'i Hillary hihaona amin'ny maha olona mahazatra antsika, manao "resadresaka" amintsika tsirairay avy, fa kosa ny doka tany am-boalohany dia miresaka momba ny "olona iray, iray ny fanapahan-kevitra iray, iray ny antony" ary "zaridainan'i firehan-kevitra madio izay mety hitomboan'ny mpiasa tsirairay, tsy ho voan'ny bibikely misy hevitra mifanohitra rehetra. " Mandritra izany fotoana izany, hoy ny feo avy any Hillary: “Tsy mila olona mitovy hevitra amiko aho.” Ary koa, ny sarin'ny zokilahy lahy dia maizina, ary mifangaro amin'ny rindrina maizina amin'ny dokam-barotra tany am-boalohany, raha ny sary an-tsaina an'i Clinton dia fotsy mangatsakatsaka, aberration ao amin'ny efitrano monolithic
Raha mila maminavina ny loharanon'ity horonantsary ity aho dia mino fa avy amin'ny fampielezan-kevitra Clinton izany. Alao an-tsaina ny fahitanao azy nefa tsy misy fahalalana ny tany am-boalohany. Ny ankamaroan'ny olona dia mety tsy mahatadidy ny tany am-boalohany izany rehetra izany. Ity misy fandikan-teny hafa amin'ny horonan-tsary Clinton: ezahin'i Clinton hanaitra ny olona lasa zatra ny politika ho toy ny fanatanjahan-tena amin'ny fifaninanana, na ady an-tendrony, fa tsy fifanakalozan-kevitra, fifanakalozana hevitra, momba ny fomba hanatsarana ny olon-drehetra. Nilaza i Hillary fa “tena tsara” ny hoe “hatreto, tsy nitsahatra niresaka izahay.” Na izany aza, misy hery ratsy sasany tsy te hiteny foana. Talohan'ny nanipazana ny marmara, ny soratra eo amin'ny efijery ambonin'i Hillary dia mivaky hoe: "io no resakay." Amin'ny fotoana manaraka ahitantsika ilay efijery, Hillary mitsiky indray dia nilaza fa "manantena ny hitazomana ity resaka ity" izy, alohan'ny hidiran'ny marmara amin'ny sledge. Ao amin'ny doka tany am-boalohany, taorian'ny fipoahana voalohany rehefa nianjera tamin'ny efijery ilay sledgehammer, dia nandre rivotra malefaka sy mangatsiaka nanolotra fahalalahana isika. Ity feo ity dia toa niadana tao amin'ny horonan-tsary Clinton, nampidina ny feo ary nanondro ny rivotra mangatsiaka noho ny fahabangana sy famoizam-po. Amin'izay fotoana izay dia tena manontany tena isika hoe iza no tena ratsy fanahy ka maniry ny hampitsahatra ny “resadresaka ataonay.” Hitanay avy eo ny efijery fotsy mamirapiratra izay milaza hoe, “Amin'ny 14 Janoary, hanomboka ny primatiora Demokratika. Ary ho hitanao ny antony tsy hitovizan'ny 2008 amin'ny '1984.' ”Mariho fa ny 1984 dia misy dikany amin'ny politika filoham-pirenena ankoatry ny bokin'i Orwell. Ny taona 1984 dia ny taona Walter Mondale, nihazakazaka tamim-panafahana liberal iray, very fanjakana rehetra tao amin'ny firenena afa-tsy Minnesota. Ny efijery fotsy, mifandraika amin'i Clinton, dia mampanantena valiny hafa amin'ny 2008, mandra-pitan'ny tabilao mainty misy ny adiresin'i Barack Obama. Tsy maintsy izy no maniry hampitsahatra ny resaka.
Mar 20, 2007 amin'ny 6: 45 AM
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra lava! Miezaka ny manara-maso ny tena olona nampakatra an'io tao amin'ny YouTube ny mpanao gazety - Te hahafantatra ihany koa aho. Tsy azoko antoka fa ny fampielezan-kevitra Clinton no nisy. Ary miahiahy ihany koa aho fa ny fampielezan-kevitr'i Obama, somary nitsikera ny dokambarotra fanafihana izy ary nisoroka izany hatreto. Ny vinavinako dia ny mpankafy an'i Obama izay manana fotoana betsaka eny am-pelatanany sy rindrambaiko tsara.
Raha tokony hifantoka amin'ny politika aho, ny mahaliana ahy amin'ny maha-mpivarotra ahy dia izay ataony amin'ny vola an-jatony tapitrisa izay lanin'ireo olona ireo amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Hampiato ny fanafihana ve izany? Hatanjaho izy ireo?
Ny zavatra iray tsikaritro avy hatrany dia ny dokambarotra John McCain tonga tao amin'ny Google niaraka tamin'ny fanonona an'i Hillary Clinton. Toa ny tobin'i McCain dia efa mahita lanja amin'ny dokam-barotra amin'ny fitondran-tena!
Mar 20, 2007 amin'ny 1: 51 AM
“Ity ve no fiafaran'i Hillary Clinton?”
Azo antoka fa manantena an'izany isika.
Mar 20, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Malahelo be aho ny lafiny sasany amin'izany, fa inona ny "Ratsy" ao amin'ny horonantsary. Toa kabary fotsiny amin'ny kabary politika amiko. Ampahafantaro ahy.
Mar 20, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Io dia ny fampitahana ny fiadidian'ny Hillary Clinton amin'ny fanjakana tsy refesi-mandidy 1984. Raha mbola tsy namaky ianao 1984 nataon'i George Orwell, Manoro hevitra aho. Mamaky haingana.
Azo antoka fa tsy fandokafana izany.
ahhh, mahazoa izao. Efa elaela ary tsy dia namaky be loatra. Ironic mandany be amin'ny fikarohana…
Ity horonantsary Hillary 1984 ity dia nanjary diso tafahoatra loatra. Misy olana lehibe any izay zava-dehibe kokoa noho
fampielezan-kevitra doka Internet kely saina tsy misy tena hafatra, indrindra fa ny iray izay tsy tany am-boalohany.
Tena marina ny hevitrao. Mampalahelo fa maro ny mpifidy no tsy mifidy ny tena olana. Heveriko fa iray amin'ireo hadisoana tamin'ny vanim-potoana maoderina amin'ny fahitana sy ny politika izany. Diso na marina, maro ny mpifidy no mihetsiketsika mora foana.
Izany no mahatonga ahy mieritreritra fa hetsika mahavariana ity. Fiandohan'ny zavatra ho avy fotsiny izany. Fantatro ny vokatr'izany amin'ny mpifidy - nefa tsy isalasalana fa hisy izany.
Mar 20, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Tena azoko tsara sy nohajaiko ny talenta an'ny vadiny ho mpandahateny lehibe
Indraindray mahatsikaiky ny zavatra, na dia tsy niniana natao aza. Manantena aho fa fantatrareo ny dikany roa sosona izay azon'ny fehezanteny rehetra izay misy ny teny hoe "Clinton" sy "am-bava" 🙂
Izy io dia dokambarotra matanjaka, indrindra raha hainao ilay tany am-boalohany (avy amin'i Ridley Scott, heveriko). Tsy hifarana io Hilary io satria maro ny olana lehibe hafa atrehin'izany, saingy tsara eto. Ny orinasa momba ilay tovolahy nahavita azy dia toa nanimba azy na izany aza.
Naheno tokoa aho fa izy dia mpifanaraka amin'ny orinasa iray izay nanao asa kely ho an'i Obama saingy noroahina izy avy eo. Mampalahelo izany - Tena tsy mieritreritra mihitsy aho hoe nisy zavatra ratsy momba ilay doka mihitsy, na dia misy aza ny lohahevitra be loatra! Mirary soa an'ity bandy ity aho, tsara tokoa izany.
Apr 7, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Izay no zavatra mahagaga indrindra hitako.